Xuuthiyiinta Yeman oo sheegay inaay dileen Madaxweynahii hore ee Yeman – Radio Muqdisho
War kasoo baxay waaxda Arrimaha Gudaha u qaabilsan Xuuthiyiinta ka dagaalama Yeman ayaa sheegaya in Madaxweynahii hore ee Yeman Cali Abdalle Saalax ay ku dileen qarax gurigiisa ay ugu xireen.
Wakaaladda Reuters oo soo xigatay Raadiye ku hadla Af Xuuthiyiinta ayaa sheegyay in Saalax Maanta lagu dilay magaalada Sanca ka dib markii qarax weyn loogu xiray Gurigiisa.
Si kastaba, ha ahaatee xoghayaha guud ee Congress-ka Yeman ayaa sheegaya in Cali Abdalle Saalax uu xaalkisa wanaagsanyahay oo uu nool yahay.
Goob joogayaal ku sugan Magaalada Sanca ayaa Reuters u sheegay in Dagaalamayaasha Xuuthiyiinta ay qarxiyeen guriga madaxweynahi hore ee Yaman oo ku yaalay Bartamaha Sanca.
Afhayeen u hadlay Kooxda Xuuthiyiinta sheeganaya dilka Cali Cabdalle Saalax oo lagu magacaabo Maxamed Cabdullaahi Salaam ayaa sheegay in kooxdiisu ay gacanta ku hayaan guriga wiil uu dhalay Madaxweyne Saalax iyo qaar kamid ah Ehelkiisa.